Ukonga kwe-SingleCare kuyatholakala emakhemisi akwaSpartanNash - Inkampani | Septhemba 2021
Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi, Inkampani Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Ukuphila Kahle Umphakathi Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Ezokuzijabulisa Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, Izindaba
Main >> Inkampani >> Ukonga kwe-SingleCare manje sekutholakala ku-Family Fare, kuma-Super Markets kaMartin, ku-D & W Fresh, nakwezinye izinhlobo ze-SpartanNash
Yize igama elithi SpartanNash kungenzeka ukuthi awulazi, uma uhlala eNyakatho naseMidwest, kungenzeka ukuthi uke wathenga komunye wemikhiqizo yabo yokuthengisa. Amagama athandwa kakhulu avela kuxhaxha lwezitolo kubalwa i-Econofoods neMartin's Super Markets. Izindaba ezimnandi? Manje usungafinyelela ukulondolozwa kweSingleCare kunoma yiluphi uhlobo lweSpartanNash olufaka ikhemisi, njengekhemisi iFamily Fare, ikhemisi iD & W, noma ikhemisi leVG.
Uma ungakaze usebenzise i-SingleCare, noma i- ikhadi lesaphulelo sekhemisi , asikaze sibe khona isikhathi esingcono sokuqala! Kuthatha kuphela izinyathelo ezintathu ezilula:
ungaphuza utshwala ngenkathi uthatha i-z pack
Sesha imithi yakho ku singlecare.com noma kuhlelo lwethu lokusebenza, ongalilanda kufayela le- Isitolo Sohlelo Lokusebenza noma kuqhubeke Play music .
Uma usutholile isigqebhezana seSpartanNash, ungaphrinta, ubhale umbhalo, noma uthumele i-imeyili kuwe. Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, luzogcina isigqebhezana efonini yakho.
Khombisa isigqebhezana usinikeze usokhemisi wakho lapho ugcwalisa incwadi kadokotela noma uthatha i-oda lakho!
Uzibuza ukuthi ngabe kukhona indawo yakwaSpartanNash eduze kwakho? Le nkampani isebenza ngaphezu kwezitolo eziyi-150 kulo lonke elase-Indiana, e-Iowa, eMichigan, eMinnesota, eNebraska, eNyakatho Dakota, e-Ohio, eSouth Dakota naseWisconsin. Amabhanela okuthengisa omkhiqizo afaka:
Imakethe Entsha Ye-D & W
Imakethe Entsha Yomndeni
Ukudla kwase-Forest Hills
Izimakethe Ezinhle ZikaMartin
Usukulungele ukusebenzisa i-SingleCare futhi ufuna ukonga okuningi? Cabanga ukujoyina uhlelo lwethu Lokonga Amalungu. Bhalisela mahhala manje ukuthola u- $ 5 kusaphulelo sakho semithi elandelayo efanelekile. Lapho usuyilungu, uzothola imali ethe xaxa yokonga ibhonasi ngokugcwaliswa okufanelekile kwe-Rx — ngemiyalo esivele isaphulelo!
iyiphi i-monistat ehamba phambili ngokutheleleka ngemvubelo
Qala ukonga namuhla!
Ukonga kwe-SingleCare manje sekutholakala eWinn-Dixie
ICoregasm: Ungayenza I-Orgasm Ekusebenzeni?
i-vyvanse ihlala isikhathi esingakanani emzimbeni wakho
kusho ukuthini u-tsh ekuhlolweni kwegazi
isiphi isithambisi esihle kunazo zonke ngemuva kokuhlinzwa
lithini inani eliphakeme le-ibuprofen ongalithatha
Ngingathatha i-motrin ne-tylenol ndawonye
iyiphi i-mucinex ekulungele kakhulu ukuminyana kwamakhala